Geelle iyo Abey oo xiriirkooda ka wada hadlay – Radio Daljir
Nofeembar 19, 2018 4:19 b 0
“Ra’isal Wasaaraha Itooboya ayaa u sheegay in Itoobiya ay sii wadi doonto kaalinteeda ku aadan dhisida xiriir wanaagsan oo dhexmara Eritrea iyo Jabuuti iyada oo loo marayo fududeynta dhammaan hababka wanaagsan”, ayuu yiri Wasiirka Arrimaha dibadda Itoobiya Workneh oo ka hadlayay kulanka Addisbaba ku dhexmaray madaxwaynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya.
Waxaa uu intaasi ku daray labada hogaamiye ka wada hadleen xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood iyo sidii loo sii xoojin lahaa.
Hogaamiyeyaasha ayaa sidoo kalle bogaadiyay isdhexgalka dalalka Geeska Afrika, inkastoo wadamada sadex geesoodka ah ee isdhexgalka Geeska Afrika Eriteriya, Soomaaliya iyo Itoobiya aysan qayb ka ahayn dowladda Jabuuti, taasi badalkeedana waxaa ay isbahaysigan ay ku guulaysteen in xayiraadda hubka laga qaado wadanka Eriteriya, inkastoo arrintaasi walaac ay ku hayso Jabuuti oo aan lasoo afjarin muranka dhuleed ee kala dhaxeeya wadanka Eriteriya.
Dhanka kalle waisirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa bogaadiyay Abey Axmed oo uu ku tilmaamay hormuudka nabadda Geeska Afrika, isagoona sheegay inuu bogaadinayo isbadaladii gudaha iyo dibadda ee uu qaaday.
Kulanka baarlamaanka Soomaaliya ee maanta